Samsung Galaxy Tab S4 waxaa la soo bandhigi doonaa Ogosto 1 | Androidsis
Waxaan halkaan joognay toddobaadyo laga bilaabo helitaanka macluumaad badan oo ku saabsan Galaxy Tab S4, jiilka cusub ee kiniiniyada Samsung. In kasta oo aan helnay faahfaahin ku filan oo ku saabsan, haddana wali ma hayno bilow gaar ah ama taariikh soo bandhigid ah. In kasta oo tan is bedeshay toddobaadkan markii aan helnay macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan soo bandhigitaankiisa.
Iyo sida ku cad macluumaadkan na soo gaadhay, Uma muuqato inay tahay inaad sugto muddo dheer inta Galaxy Tab S4 uu suuqa ku dhacayo.. Waxaa la isla qaatay in loo soo bandhigi doono taleefanka cusub ee shirkadda. Laakiin way imaan kartaa ka hor intaanay taasi dhicin.
Samsung waxay soo bandhigi doontaa taleefankeeda cusub ee heer sare ah Ogosto 9. Hadana hadaan eegno xogahaas, soo bandhigida Galaxy Tab S4 waxay dhici doontaa 1da Ogosto. Markaa waa arrin maalmo kooban ah oo aan kula kulmi karno kiniinkan cusub shirkadda Korea.
Waxay u muuqataa taas qaabkani wuxuu yeelan doonaa dhacdo soo bandhigid oo ka duwan inta kale. Waa kaniiniga ugu sareeya ee shirkadu soo bandhigi doonto, markaa waxay umuuqataa inay doonayaan inay siiyaan ahmiyada koowaad. Marka lagu daro Galaxy Tab S4, shirkadda Kuuriya waa inay seddex kale suuqa keentaa bilaha soo socda.
Tan iyo in muddo ah Samsung waxaa lagu yaqaan inay ku shaqeyso wadar ahaan afar kiniin, oo aan ka helno tan Galaxy Tab S4. Waxba lagama oga waqtiga la joogo seddexda nooc ee kale ee shirkada imaaneyso. Waxay u badan tahay, inuu jiri doono mid la soo bandhigi doono Ogosto 9, laakiin ma jirto wax xaqiijin ah oo ku saabsan xaqiiqadan.
Dhowr maalmood gudahood waa inaan ka takhalusnaa shakiga waxaanan arki karnaa haddii toddobaadkan uu bilaabmayo mar hore miyaa Galaxy Tab S4 la soo bandhigi doonaa mise lama soo bandhigi doono. Haddayna ahayn, maxaa markaa noqon doona taariikhda rasmiga ah ee loo soo bandhigayo kiniinka cusub shirkadda Korea.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Kiniiniyada Android » Samsung Galaxy Tab S4 waxaa la soo bandhigi lahaa 1da Ogosto
Maamuus Ciyaar Maamuus Gaar ah Ayaa Bilaabmaya Ogosto 1
Moto Z3 waxaa la soo bandhigi lahaa Ogosto 2